प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणमा नेपाल र नेपालीको पक्षमा सम्झौता होस्| Nepal Pati
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री एवं पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसँग प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणको सन्दर्भमा
नेपालपटी डटकमका लागि एलीना कार्कीले गरेको कुराकानी ।
प्रधानमन्त्री चीन भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ, यो भ्रमणबाट तपाईले कस्तो अपेक्षा गर्नुभएको छ ?
भारत र चीन दुवै हाम्रा छिमेकी देशहरू हुन् । दुवै देशले आफुलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर आफना विकास निर्माणका कार्यहरू अगाडि बढाउनुपर्छ । हामी छिमेकी देश हौँ । छिमेकी भएका कारण कुनै पनि कुरामा हामीलाई हस्तक्षेप नगरी विकास निर्माणका काममा छिमेकीहरूले पनि सघाउनुपर्छ । र सम्झौता गरिएका विषयहरू कार्यान्वयन गर्न हामीलाई सहयोग गर्नुपर्छ । हामी भारत, चीन लगायत सबै देशसँग असल सम्बन्ध बनाउन चाहान्छौँ र यही सम्बन्ध कायम होस् भन्ने मेरो र आम नेपाली जनताको चाहना पनि हो । असल सम्बन्ध कायम गर्न यस पटकको भ्रमण केन्द्रित होस भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।
अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा केपी ओलीले चीनसँग ऐतिहासिक सम्झौता गर्नुभएको थियो । यसको कार्यान्वयन र नयाँ सम्झौता हुने अवस्था देख्नुभएको छ की छैन ?
सम्झौताहरू भनेका सैद्दान्तिक पक्ष हुन् । म परराष्ट्रमन्त्री भएको बेला पनि वान बेल्ट वान रोडको सम्झौता भएकै होे । सम्झौताहरू धेरै हुन्छन् र भएका पनि छन् । तर व्यवहारिक पक्ष भनेको भएका सम्झौताहरूलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने चरणसम्म ल्याउने भन्ने हो । अहिलेको प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा पनि नयाँ सम्झौता पनि हुन सक्छन र होलान पनि, तर कसरी हुन्छ भन्ने हो । कार्यान्वयनको कुरा ती सम्झौताहरू कुन रुपमा गरिन्छ भन्नेमा निर्भर हुन्छन् ।
सरकारी अधिकारीका भनाइ सुन्दा चीनले ल्याईदिए मात्र नेपालमा रेल आउँछ भन्ने बुझिन्छ के नेपाल आफैँले यसको अगुवाई गर्न सक्दैन् ?
हामीले हाम्रै लगानीमा रेल निर्माण गर्न सक्ने आर्थिक स्रोत छैन् । हामी आफैँ बनाउन सक्ने अवस्थामा छैनौँ । ठुलो लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा हाम्रो छैन् । ऋण लिएर पनि ब्याज तिर्न सक्ने अवस्था छैन् जस्तो श्रीलङ्का तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको थियो हाम्रो पनि तेस्तै अवस्था आउँछ । हामी अबको एक सय वर्षपछि मात्रै रेल मार्ग निर्माण गर्न सक्ने स्थितिमा पुग्न सक्छौँ तर अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा हामीसँग त्यस्तो अवस्था छैन् । आफैले लगानी गर्न सक्ने अवस्था आउन अझै एक, डेढ सय बर्ष पर्खिनुपर्छ ।
नेपालले असंलग्न परराष्ट नीति लिएको छ, छिमेक नीति सन्तुलन गर्न सरकारले कसरी सोच्नुपर्छ ?
हामीले छिमेकी मुलुकहरू चीन र भारत मात्र नभई अन्य सबै मुलुकसँग बराबरी सम्बन्ध कायम राख्नुपर्छ । असंलग्न भनेपनि जे भनेपनि एकले अर्को राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता, अखण्डताको जगेर्नामा सहयोग गर्नुपर्छ । यसमा सरकारले पनि मुलुकको स्वार्थलाई मनन गरेर सम्झौता गर्नुपर्छ । गरिएका सम्झौता राष्ट्रको भलाइका निम्ति हुनुपर्छ । जनताको समस्याहरूका समाधान गर्ने खालका सम्झौताहरू हुनुपर्छ ।
तपाई पूर्व परराष्टमन्त्री पनि हुनुहुन्छ । कुनै पनि प्रधानमन्त्री भारत जाँदा नेपाली जनताले शंकाको नजरले हेर्छन र चीन जाँदा आशा राख्छन किन होला ?
यसमा २ ओटा कुरा छन् । एउटा भारत हाम्रो सबैभन्दा नजिकको छिमेकी र अर्को हाम्रो भारतसँग खुला सिमाना पनि छ । भारत सदियौँदेखि हाम्रा आन्तरिक मामिलामा परिचित छ र हामी पनि अरु छिमेकी भन्दा उसलाई नै नजिकबाट चिन्छौँ । भारत र हाम्रा केही रितीरीवाज र संस्कार पनि मेल खान्छन । एउटा कुरा के छ भने जोसँग बढी अन्र्तक्रिया हुन्छ, समस्या हुन्छ नै यस्तै अरु छिमेकीको तुलनामा हाम्रो भारतसँग नै बढी अन्र्तक्रिया हुन्छ यो पहिलेदेखिकै चलन हो । अन्र्तक्रिया हुँदैमा शंका गर्नु हाम्रो होइन । पछिल्लो समय सत्तामै बसेकाहरूले यस्तो उस्तो भन्दै बढाईचढाई कुरा गर्ने गरेको पाईन्छ । यो प्रवृति राम्रो होइन । काम भन्दा कुरा धेरै गर्ने परिपार्टी राम्रो होइन । चीन हाम्रो एउटा समृद्ध छिमेकी देश हो । उसँग भन्दा हाम्रो बढी आवतजावत अन्र्तक्रिया हुने भएकाले नै भारत भ्रमणमा जाँदा यस्ता आशंका पैदा भएका होलान् ।
प्रधानमन्त्रीलाई चीन भ्रमणसँग सम्बन्धित तपाईका सुझाव के–के छन् ?
विभिन्न पक्षमा समझदारी तथा सम्भौता गर्ने भन्ने बाहिरबाट सुनिएको छ । यसमा कुनै सुझाव दिनुपर्ने भयो भने दिउँला । तर, भ्रमणमा दुई देशबीचको सहयोग बढाउनुपर्छ । व्यापार लगानी बढोस र जे जस्ता सम्झौताहरू हुन्छन ती सवै नेपाल र नेपाली जनताको पक्षमा हुनुपर्छ । साथै अनुदान सहयोग पनि होस् भन्ने हाम्रो चाहना छ ।